Indawo yeBakubung Bush Lodge, iPilanesberg National Park
I-Bakubung Bush Lodge ikhona e-palanesia mahhala i-Pilanesberg National Park ngaseSun City, eNingizimu Afrika.
I-Bakubung Bush Lodge ikhona enhliziyweni ye-malaria e-Pilanesberg National Park. Jabulela ukuthula kwesibhakabhaka sase-Afrika ngenkathi uhlala endaweni elula yokuhamba ibanga eliya eSun City. Ukushayela ukusuka eGoli kuya eBububung Bush Lodge kuzothatha cishe amahora amabili kuye ngokuhamba.
Izikhombisi ezisuka e-Fourways eSandton
Thatha iN1 North ukuya ePolokwane. Thatha i-N4 Rustenburg Split (umzila wendlela). Landela umgwaqo ngokuqondile, uphawu lokungena ngakwesobunxele lomgwaqo lubonisa i-Pilanesberg ngakwesobunxele emgwaqeni 91. Phuma ngakwesokunxele emgwaqweni omkhulu.
Ekhoneni le-T jikela ngakwesokudla bese uqhubeka kulo mgwaqo uye eSun City. Uma usufike eSun City, hamba ngqo egalaji leZenex ngakwesokudla sakho, emva kwe-4km uzobona isibonakaliso sokukhombisa ukuthi ungene ngakwesokudla eBububung, ulandele umgwaqo futhi uzokuholela esangweni laseBakubung nendawo yakho yokulala e-Sun City.
Izikhombisi zendlela zezibalo